Jabhadda Tigreega Oo Si Xun u Xasuuqday Ciidammo Eritrean Ah Oo Ay Jid-gooyo U Galeen | Dhamays Media Group
Maqale (Dhamays) – Ciidammada Tigreega ee dalka Itoobiya, ayaa Waxyeelo laxaadle gaadhsiiyey Ciidammada Eritrea oo dhawaan ka baxay Gobolka Tigreega oo ay soo galeen xilligii Ciidammada Dawladda Federaalka Itoobiya weerarka ku qaadeen Gobolka Tigreega.
Wararka ka imanaya Dalka Itoobiya, ayaa sheegaya in Dagaalyahannada Jabhadda Tigreegu ay jid-gooyo u galeen Ciidammada Eritrea oo watay illaa 27 gaadhi oo isugu jira Taangiyo iyo oraallo ku sii jeeday Magaalada Adigrat.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in Jabhaddu gubtay inta badan 27-kii isugu jiray Taangiyada Dagaalka iyo Oraallada qaada Askarta, halkaana ku dileen illaa 2400 Askarta Eritrea, halka ay qaar kalena Maxaabiis ahaan u qabsadeen.
Warbaahinta dunida ee Caalamiga ah qaarkood, ayaa soo weriyey in Askarta Eritrea ee halkaas lagu dilay ay ku jireen illaa 3 Sarkaal oo sar sare.
dhanka kale, Dagaallada u dhexeeya jabhadda TPLf ee Tigreega iyo Ciidammada Dawladda Dhexe ee Itoobiya, ayaa sii laba-kacleeyay Toddobaadyadii u dambeeyay, waxaana waqooyi Itoobiya ka socda dagaallo lagu huubtay.
Previous: Madaxweyne Biixi Muxuu u sheegay Hablaha Saraakiisha ah ee ka tirsan Booliska ee uu la kulmay?
Next: Dhisme Muhiimad wayn ku fadhiya oo lagu Soo kordhiyay Cisbitaalka guud ee Hargeysa